10-ka Dal Ee Afrika Shaqo La’aantu Ugu Yar Tahay Iyo Sababta | Berberatoday.com
10-ka Dal Ee Afrika Shaqo La’aantu Ugu Yar Tahay Iyo Sababta
June 19, 2016 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.net/com)-Qaaradda Afrika waxa ka jirta shaqo la’aanta ugu badan adduunka. Laga soo bilaabo 2000, ayaa in ka badan 27 kun oo Afrikaan ah u dhinteen iyagoo isku deyaya inay sharci- darro ku galaan dalalka Yurub, kuwaasoo naftooda ku biimeeyey badweynta iyo saxaraha.
Waxa loo aaneeyey in dadkaas badankoodu ay shaqo-raadis ahaayeen, kana baxsanayeen saboolnimada ba’a ee Afrika inta badan saamaysa.
Shaqo la’aanta dalka Afrika ka jirta ayaa ka sarraysa 25%, balse hadda waxa jira waqtiyadan dhaqaale koboc qaaradu ku tallaabsatay oo keenay in waddamo badan shaqo la’aanta ka jirta hoos u dhacday.
Cilmi-baadhisyo cusub ayaa muujiyey in tiro ka badan 70% bulshada Afrika ay hoos uga yar yihiin da’da 25 jirka, taasina keentay in xoogga shaqeeya tirade ka bato. Waxa kaloo sabab u ah degenaansho la’aanta siyaasadeed iyo sharci la’aanta in shaqo la’aantu badato, halka aragti fiican laga bixiyo korodhka hantida gaarka ah oo faa’iido badan dalalka qaar u keentay.
Fursadaha shaqo iyo ganacsi abuur ee Afrika ka jiraa waxa laga yaaba in ay kor u kacaan tobanka sanno ee soo socota, iyagoo da’ yar tiro badan fursado waqtigan helay sida daraasada la diyaariyey sheegayaan.
Waa dal ku yaal galbeedka Afrika, waxana ku dhaqan bulsho 10.6 milyan ah. Shaqo la’aanta dalkan waxa ay maraysay 2.4%, sannadkii 2013-kii, iyadoo bishii February 2016 uu dalku bilaabay inuu dhiso caasimaddii ugu horraysay ee dhinaca tignoolajiyadda (Benin Smart City), waxana mashruucan lagu abuurayaa 50,000 (Konton kun) oo shaqo oo da’yarta loogu talogalay si loo sii yareeyo heerka shaqo la’aanta.
Waa jasiirad ka kooban 115 jasiirad la mood ah, taasoo dhacda Badweynta Hindiya. Siishalis waxa ku dhaqan dadweyne gaadhaya 90,000 (Sagaal boqol oo kun) oo qof. Shaqo la’aanta ka jirta waa 2.7%. sannadkii 2014-kii waxa uu dalkani soo saaray sharci cusub oo uu ku maamulayo, shaqana ugu abuurayo muwaaddiniintiisa.
Mashruuc-sharciyeedkan waxa loogu talagalay in dadka muwaadiniinta ah aanay shaqo waayin, dalkana ka haajirin. Bishii February ee 2016-kii, waxa jasiiraddan laga sameeyey qorshe 2016 ilaa 2020 ah oo loogu talaglaay in da’yarta shaqo abuur loogu sameeyo, dhaqaalaha dalkana lagu kobciyo. Waxa la sameeyey shaqo-abuur badan oo dhinaca dalxiiska, kalluumaysiga iyo waliba shaqooyinka qaran ah.
Ruwaanda waxa ay dhacda bariga Afrika. Bulshada ku dhaqan waa 11.34 milyan. Waxa ay ka mid tahay dalalka shaqo la’aanta ka jirta ugu yar tahay Afrika, sababtoo ah 3.4% bulshadeeda shaqo la’aan baa haysa. Ku dhawaad 60% dadka shaqeeya ee dalkan waxa uu qof kastaba haystaa in ka badan hal shaqo.
Shaqooyinka dalkan waxa hoggaanka u haya da’yarta, gaar ahaan dhinaca beeraha. Haweenka ayaa dhinaca shaqada kaga badan ragga, inta badana shaqooyinku waxa ay ku badan yihiin meelaha baadiyaha ah marka loo eego magaalooyinka.
Dawladda Ruwanda waxa ay inta badan diyaarisaa nidaam ay da’yarta beeraha kaga shaqaynayaan si ay wax u soo saaraan, gaar ahaan shaaha iyo kafeega. Siyaasadda shaqaalaysiinta Ruwanda waxa inta badan dawladdu bartilmaameed ka dhigata in 20,000 shaqo ay abuurto sannad kasta. Sidaa darteed, 70% dadka Ruwanda waxa ay ka shaqeeyaan beeraha
Dalka Gaana oo caan ku ah soo saarista kookaha (Cocoa-Producing nation) oo galbeedka Afrika dhaca, waxa ku nool ku dhawaad 27.2 milyan qof. Dalkan shaqo la’aantiisu waxa ay dhan tahay 5.20%. Bishii May 2015-kii shirkadda Microsoft iyo Mac-hadka caalamiga ah ee International Institute of Communication and Development oo ah hay’ad gargaar ayaa bilaabay barnaamij la yidhaa Tizaa Work oo da’ yarta shaqo abuur loogu samaynaayo.
Barnaamijkan ujeeddadiisu waxa ay ahayd in xirfad la baro, lana qalabeeyo da’ yarta dugisyada ka soo baxda si ay uga hawlgalaan goobo kala duwan oo qaranka ah. Dawladdu waxa ay sidoo kale abuurtay siyaasadda Adeega Da’ yarta (National Youth Service) oo jaamacada laga bilaabay iyo waliba barnaamijka shaqalaysiinta dhallinyarada (National Youth Employment Program) si ay inta aan shaqayn u helaan shaqo.
Waa jasiirad dhacda badweynta Hindiya. Dal ahaan waxa ku nool bulsho dhan 1.3 milyan qof. Sannadkii 2015-kii shaqo la’aantu waxa ay ka maraysay 7.80%. Dawladda ka talisa waxa ay kala qaybisay dhaqaalaheeda si ay hoos ugu dhigto in kharashaadkeedu meelo khaldan ku baxo, inta badana waxa ay awoodda saarta dalxiiska. Waxa ku soo badanaya shirkadaha iyo goobaha wax-soo-saarka. Xukuumadda talada haysstaa waxa ay bilawday barnaamij ay shaqo abuur ugu samaynayso 15,000 qof sannadkiiba. Xeerka shaqaalaha dalkan wax badan baa laga beddelay si loo ilaaliyo, loona daryeelo dadka shaqaala ah.
Guddida Maalgashiga Murashis (Mauritius Board Investment) waxa ay waqtigan bartilmaameedsanayaan in 10,000 shaqo abuur ah la sameeyo ilaa 2019-ka. Waxaana arrintan lagu gaadhaya iyadoo dadka diiwaangelin casri ah lagu samaynaayo si shaqo loogu helo.
Waa dalka ugu weyn Afrika. Shaqo la’aanta dalkan 2015 waxa ay ahayd 11.20% . sannadkii 2013-kii dawladdu waxa ay diyaarisay siyaasad ‘Marshall Plan” la yidhaa oo ay shirkadaha ku qasbayso in ay shaqaalaysiistaan dadka muwaadiniinta ah. Qorshaha siyaasadan waxa ku jira in dadka ajenebiga ah loo shaqaalaysiinayo oo kaliya waxa aanay aqoonta amma xirfada u lahayn dadka muwaadiniinta ah.
Sidoo kale, dadka dhallinyarada ah ee ganacsiga bilaabaya waxa hoos looga dhigay dul saarka laga qaado daynta ay qataan. Waxa kale oo Wasaaradaha iyo hay’adaha dalwadda lagula taliyey in ay hehsiisyada siiyaan dadka muwaadiniinta ah ee ganacsatada ah.
Dalka Masar waxa uu ku yaala Waqooyiga Afrika. Masar waa dalka dhoofinta saliida ugu dalalka Afrika. Shaqo la’aanta dalkan waxa ay dhan tahay 12.77%. Dawladdu waxa ay December 2012 bilawday qorshe ay shaqo ugu abuurayso 750,000 qof oo ganacsi yar loo samaynaayo si ay ugu shaqaystaa.
Sidoo kale, waxa ay 21 heshiis la gashay shirkaddo kuwa tamarta ah oo Shiinaha laga leeyahay si ay dadka muwaadiniinta ahna shaqo uga helaan. Waxa iyaguna heshiisyadan ka mid ah baanan, shirkado kaabayaasha dhaqaale ka shaqeeyo. Waxa internetka Masar laga helaa bil kasta 2,000 shaqo…
Tuunisya waxa uu ka mid yahay dalalka xagga dhaqaalaha hoggaanka u haya woqooyiga Afrika. Shaqo la’aanta dalkan waxa ay tahay 15.4%. Waxa Tuunisiya leedahay siyaasad iyo goobo shaqaalaysiin (Green jobs Platform), kaasoo ay maalgeliso Hay’adda Maalgelinta Bariga Dhexe iyo Woqooyiga Afrika (Middle East and North Africa Tansition Fund). Hay’addan waxa ay lacagta soo marsataa Bangiga Horumarinta Islaamka (Islamic Development Bank). Hantida ku baxda mashruucan shaqaalaysiinta ah waxay dhan tahay $3.8 milyan doollar.
Mashruucan shaqo-abuurista waxa ujeeddadiisu tahay in lagu hawlgaliyo ardayda ka baxda jaamacadaha woqooyiga Afrika. Ugu yaraan 50 mashruuc oo shaqaalaysiin ah ayaa dalka Tuuniisiya laga bilaabay, kaasoo uu danta bixinayo bangiga horumarinta Tuunisiya. Qof kasta waxa la siinaayey $35,000 (shan iyo soddon kun oo dollar) si uu ganacsi uu leeyahay ugu samaysto.
Waa dal aan lahayn bad, waxaannu dhacaa koonfurta qaaradda Afrika. Bulshada ku dhaqan waxay dhan yihiin 13 milyan oo qof. Shaqo la’aanta ka jirta waa 14.1%. Ku dhawaad 9.2 milyan qof waxa ay ku nool yihiin nolol saboolnimo ah.
Dawladda Sambiya waxay inta badan samaysaa shaqooyin dhinaca xirfadda ah iyo waliba dugsiyo tababar oo ay xirfado shaqo lagu heli karo barto da’ yarta Sambiya. Waxa kale oo dadka dugsiyada ka tega amma waxbarashada iskaga baxa siisaa tababarro kala duwan oo ay noloshooda ku maarayn karaan. Inta badan tacliinta dalkani waxay u qaybsantaa mid dadban iyo mid toos ah (Formal and informal).
Qorshaha heer qaran ee shaqaalaysiinta dhallinyarada ee Sambiya waxa ku jira in da’ yarta loo sameeyo shaqooyin fiican. Dalalka caawiya dalkan arrintan waxa ay ka geystaan hawl weyn, waxaanay inta badan soo bandhigaan qorsheyaal ganacsi abuuritaan, iyadoo dhallinyarada Sambiya la siiyo lacag ay ku abuurtaan ganacsiyo u gaar ah.
Dalkan Bostawana ee waxa ku nool laba milyan oo qof. Waxa uu ka mid yahay waddamada dhaqaalahoodu aadka u kobcayo caalamka. Shaqo la’aanta ka jirta waa 18%. Dawladdu waxa ay kor u qaadday soo-saarka alaabaha iyo dhoofintooda amma adeeg-bixinta dibadda 7.2% sannadkii 2015-ka, taasina waxay keentay in dhallinyaro badan shaqo la’aanta ka baxdo.
Dalka Bostawana waxa uu dagaal kula jiraa sidii ay meesha uga saari lahayd shaqo la’aanta. Waxa ay samaysa mashruuc lagu shaaqalaysiinayo dadka aan xirfadda lahayn sida loo dirayo maaraynta xoolaha iyo dhismayaasha. Waxa kaloo ka socda waddankan mashaariic horumarineed oo laga shaqaalaysiiyo dhallinyarada.
Akhriste, haddii aad la socotay dawladaha kala duwan ee 10 ah ee aan soo sheegnay sida ay dedaalka ugu galeen in ay shaqo-abuur u sameeyaan, meeshana uga saaraan shaqo la’aanta dhallinyarada oo dhibaato badan keena, waa wax aynu gaadhi karno, haddii dedaalkeeda loo galo. Dhammaad.